Artichoke - na-eto eto nke osisi, na-akụ mkpụrụ osisi, na-eto eto na-emeghe n'ala
Artichoke - na-eto eto nke osisi, iwu nke akuku ma na-elekọta seedlings
Osisi a, nke a weere dị ka osisi, nwere ike ịchọta ya na ọnọdụ dị jụụ - dị ka ọtụtụ ndị si kwuo, ọ na-eto na ala ọkụ. Ka o sina dị, ọbụna na mpaghara ebe ugwu, ị nwere ike ịkụzi atịchok, ịmịpụta mkpụrụ ga-aga nke ọma ma ọ bụrụ na agbasoro iwu ụfọdụ.
Kedu ka esi eto osisi artichoke?
Mbụ, ka anyị lee ihe bụ atịchok? Osisi a nwere ọrụ a na-achọ mma, ọ ga-ejikwa ngwa ngwa gbakwunye ihe ndozi nke ogige ahụ. A pụkwara iri ya, artichoke dị ezigbo uru - mkpụrụ ya nwere nnukwu calcium, phosphorus, magnesium, carbohydrates, acid na vitamin. Na mgbakwunye, ha dị ezigbo ụtọ. Atịchok nwere ọtụtụ ụdị, nke dị iche na ibe ya site na oge ịkụ (site n'oge ruo n'oge), ma ha na-akọ ihe dị ka otu. Nke mbụ, a na-akụ mkpụrụ osisi ahụ n'ụlọ, mgbe ahụ, a na-akụ mkpụrụ osisi ndị ahụ n'ọhịa.
Mgbe ị na-akụ ihe atịchok - na - eto eto
Mgbe ị na-emepụta atịchok n'ụlọ, na-eto ya site na mkpụrụ nwere ike iyi ihe siri ike, na oge mbụ, ọ ka mma iji otu ụdị, ọkacha mma site na mmalite. Mgbe ị na-akụ ihe atịchok maka seedlings, na-adabere n'ụdị dịgasị iche iche, a na-emepụta nke mbụ ná mmalite ụbọchị March, mana ọ dị mkpa ịkwadebe mkpụrụ maka izu 2-3.
Anyị ga-akwadebe atịchok maka ịgha mkpụrụ n'ime izu abụọ. Maka ihe ịga nke ọma na germination, anyị na-agbapụta osisi ahụ na-eguzo na mmiri dị n'ime ime ụlọ ma na-ahapụ maka awa iri na abụọ n'ime ụlọ ọkụ. N'oge a, mkpụrụ osisi ahụ dị mma, mgbe ahụ, anyị na-ewepụ ha, tinye ha na akwa anụ dị nro, kechie ya, kpuchie ya na fim iji mee ka mmiri dị ogologo, ma tinye ya na ebe ọkụ. N'ime ụbọchị ise, osisi kwesịrị ịmalite ịmalite.
Mgbe nke ahụ gasịrị, anyị na-etinye ngwugwu ahụ na refrjiraeto n'elu ala. A pụghị ịkpọ nke a ihe dị mkpa, mana obi jụrụ oyi na-adịru nwa oge, na-eme ka germination ha ka njọ. Osisi ahụ ga-esiwanye ike, ya mere, ohere nke okooko na mkpụrụ osisi na-etowanye elu n'otu afọ ahụ. Hapụ mkpụrụ osisi na nju oyi maka izu 2.
Artichoke - kụrụ na seedlings
Ọzọ, anyị ga-achọpụta otu esi akụ mkpụrụ osisi artichoke. Iji malite, dozie akpa kwesịrị ekwesị - nke a nwere ike ịbụ ihe mgbanaka plastik, ma ọ bụ ihe ndị pụrụ iche maka seedling . Ala kacha mma maka atịchok bụ ngwakọta nke ala turfy, humus na ájá. A na-etinye mmanụ dị iche iche ma kpochaa ya.
Na ala nke tank anyị ga-ejupụta na mmiri drainage nke na mmiri oke mmiri adịghị stagnate. Na-esote, anyị na-etinye ala akwa ala, oghere nke nwere nro nke 1-1.5 cm na anya nke ihe dị ka 4 cm. Debe osisi n'ime olulu ma fesaa ya na obere oyi akwa ala, moisturize ha na egbe égbè. Mgbe anyị rutere, anyị na-etinye akpa ahụ na ebe dị ọkụ na ebe dị mma, sill ahụ kwesịrị ekwesị. Mana ndi mmadu kwesiri ihu igwe kwesiri izere ya. Na-ekpuchi ihe nkiri ma ọ bụ iko a kụrụ osisi anaghị aba ya uru - atịchok anaghị achọ ụlọ ọ bụla.
Artichoke seedlings - cultivation
Ọ dị mkpa ka ichere naanị ụbọchị ole na ole ka mkpụrụ mbụ wee pụta, na ụbọchị 10-12, akwụkwọ mbụ ga-amalite na osisi ahụ. Ọzọkwa, ka atịchok wee na-eto ma na-eto nke ọma, ọ dị mkpa inye ya ọnọdụ na-eto eto. Mee ka okpomọkụ dị na 15 Celsius, mee ka ìhè ọkụ dị mma, nke mere na ome ahụ anaghị agbatị. Mmiri kwesịrị ịdị na-agafeghị oke, mmiri mmiri na-erugharị na ọganihu nke atịchok na-eto eto.
Mgbe osisi dị iche iche nwere ọtụtụ epupụta, ha na-esi ike na akpa, n'oge a, ọ dị mkpa ịmepụta, ihe ndị dị na ntanye ga-adị mbara. Anyị na-ejupụta ụwa n'ite mmiri, na etiti anyị na-eme ka miri emi na miri. Anyị na-ewepu osisi bushes nke seedlings site na akpa. Iji mee nke a, anyị na-agba mmiri ala n'ụba, ma jiri nlezianya wepụ osisi ahụ n'otu n'otu wee tụọ ọnụ nke mgbọrọgwụ kachasị - nke a dị mkpa iji nwee ike ịmị mkpụrụ nke ọma.
Na-esote, anyị na-akụ osisi ndị ahụ dị iche iche na mmiri, na-eme ka ha nọrọ ebe dị mma. N'ime izu abụọ, osisi artichoke seedlings, site na mkpuru osisi, chọrọ nri mbụ - nke infusion nke mullein , tụgharịrị na 1:10. N'izu abụọ ọzọ, ọ dị mkpa ịzụta osisi ndị ahụ na-ejupụta na ịnweta fatịlaịza.
N'ime oge a, osisi artichoke seedlings, nke toro site na mkpụrụ osisi nke ihe ịga nke ọma, nwere ike ịmalite ịgbasi ike. Iji mee nke a, họrọ ụbọchị ndị na-ekpo ọkụ na ndị na-adịghị agwụ agwụ ma wepụsịa ihe ndị ahụ na seedlings ruo ọtụtụ awa ruo ikuku ọhụrụ. Nke nta nke nta, atịchok na-anọ n'okporo ámá kwesịrị ịbawanye ruo awa iri, na-echebe na ìhè anyanwụ na mmiri ozuzo.
Artichoke - kụrụ na-elekọta na-emeghe ala
Azịza nye ajụjụ ahụ, ma ọ ga-ekwe omume ịkụzi atịchok n'ubi, doro anya - ị nwere ike! Ọbụna enwere ike ifuru ma mịa mkpụrụ ma ọ bụrụ na ị họrọ ezigbo ebe ị ga-akụ. Ebe ndị a na-atụgharị anya ma ọ bụ nkata nke ala dị na ala dị larịị, adịghị adaba - mgbọrọgwụ nke atịchok na-aga miri emi, mmiri mmiri na-erugharị pụkwara ịmalite ire. Ebe kacha mma maka ịkụ mkpụrụ osisi toro eto sitere na osisi bụ mkpọda ndịda.
E nwere ike kụrụ mkpuru osisi na akwa ma ọ bụ n'olulu dị iche iche site na nnukwu osisi na osisi. Oge kachasị mma maka ịkụzi atịchok sitere na mkpụrụ osisi na-emeghe n'ala bụ n'etiti ọnwa May. Mgbe ọdịda, a ghaghị ịmịba mmiri ndị ahụ , a ga-ekpuchikwa ala . Mgbe emegharịrị osisi, a ghaghị ịsị nri.
N'okpuru ọnọdụ kwesịrị ekwesị na-elekọta ma na-elekọta, artichokes toro site na mkpụrụ osisi ga-eto eto na August-Septemba, mgbe nke a gasịrị, a ghaghị iwepụta oke nke mmiri ogbugba mmiri. Iji ghọta ma atịchok emeela agadi, a ga-enyocha mwepụ nke akpịrịkpa kachasị elu. Ọ bụrụ na ha nwere ike ịkwaga, mgbe ahụ ọ bụ oge iwe ihe ubi.
Kedu ka obereekere si eto?
Perlite maka osisi
Akuku apụl nke oyi
Otu esi akụ beets - ihe nzuzo nke ezigbo owuwe ihe ubi
Roses nke David Austin
Esi echekwa kabeeji n'oge oyi?
Agụụ - na-eto site na mkpụrụ
Geiger ifuru - atụmatụ nke na-eto ma na-elekọta
Na-eto eto na-emeghe n'ala
Kedu ka esi etinye cactus n'ime ite ọzọ?
Kedu ka esi esi eme ka orchid phalaenopsis?
Calibraroa - na-eto site na osisi
Blackberry akuku na opupu
Fatịlaịza potassium sulfate - were
Na-eme ihe na-akpata nsogbu
Kedu otu esi ahazi agbamakwụkwọ onwe gị?
Nzuzo - ọgwụgwọ
Ụlọ ihe nkiri nke St Francis (Santiago)
Mastic maka achicha
Mgbochi na ihe nwatakiri
Guinea nnụnụ - ịzụlite ma na-edebe n'ụlọ, nlekọta bụ isi
Kasị njọ - Oscar-2016
A na-ewute nwatakịrị n'ụlọ akwụkwọ
Krasnaya Polyana, Sochi - ihe ị ga-ahụ?
Akara ọla edo na diamond
Kedu otu esi echekwa elekere anya maka umuaka?
Otu oge na-ekpuchi ndụ
26 lifjhaki, nke ga-eme ka ndụ onye nwe pusi dị mfe
Akwa Uwe nke India
Kedu ka esi eme tomato mgbe ị kụrụ?
Amber Hurd achọghị ikwu okwu banyere ime ihe ike n'ụlọ ebe ị ṅụrụ iyi
33 kasị mma gifki